OTU ESI BELATA FAỊLỤ PDF NA ENWEGHI IKE IGHOTA NTANETI - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Compress PDF faịlụ online
Mgbe ụfọdụ, ị ga-ebelata bekee PDF ka o wee dịkwuo mfe iziga ya site na e-mail ma ọ bụ maka ihe ọzọ kpatara ya. Ị nwere ike iji edebe ihe nchekwa iji depress akwụkwọ ahụ, mana ọ ga-adị mfe iji ọrụ ịntanetị pụrụ iche nke a na-amụba maka ọrụ a.
Nchịkọta mkparịta ụka
Isiokwu a ga-akọwa ọtụtụ nhọrọ maka ibelata ụdị PDF. Ọrụ ndị na-enye ọrụ a bụ ihe dị ntakịrị dị iche na ibe ha. Ị nwere ike ịhọrọ ụdị ọ bụla ịchọrọ maka iji oge.
Usoro 1: SodaPDF
Ebe a nwere ike ibudata na mpikota onu faịlụ sitere na PC ma obu igwe ojii nchekwa Dropbox na Google mbanye. Usoro a dị nnọọ ngwa ngwa ma dị mfe, ma ngwa weebụ adịghị akwado aha faịlụ Russian. PDF ekwesịghị ịgụ Cyrillic na aha ya. Ọrụ ahụ na-enye njehie mgbe ị na-agbalị ibudata akwụkwọ dị otú ahụ.
Gaa na ọrụ SodaPDF
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ, pịa "Nyochaịhọrọ akwụkwọ iji belata nha.
Ọzọ, ọrụ ahụ ga-agbakọ faịlụ ahụ ma nye gị ibudata nsụgharị edinyere site na ịpị "Ịchọgharị ma nbudata na Nchọgharị".
Usoro 2: SmallPDF
Ọrụ a makwaara otu esi arụ ọrụ na faịlụ si na ígwé ígwé ígwé ojii, mgbe ọ kwusịrị mkpakọ, na-agwa onye ọrụ ahụ ole nha ahụ belatara.
Gaa na ọrụ SmallPDF
Pịa bọtịnụ ahụ "Họrọ faịlụ"iji kwupụta akwụkwọ ahụ.
Mgbe nke a gasịrị, ọrụ ahụ ga-amalite usoro mkparịta ụka na mgbe ọ kwụsịrị, ọ ga-enye iji chekwaa faịlụ site na ịpị bọtịnụ otu aha ahụ.
Usoro 3: ConvertOnlineFree
Ọrụ a kachasị na-emepụta usoro nke ibelata nha, ozugbo ịmalite ịdebanye akwụkwọ ahụ mgbe ọ gbasịrị ya.
Pịa bọtịnụ ahụ "Họrọ faịlụ"ịhọrọ PDF.
Mgbe pịa nke a "Gwakọta".
Ngwa weebụ ga-ebelata ụda faịlụ, mgbe nke ahụ gasịrị ọ ga-amalite ibudata na kọmputa ahụ.
Usoro 4: PDF2Go
Ngwa weebụ a nyere ntọala ndị ọzọ mgbe ị na-ede akwụkwọ. Ị nwere ike mpịpịa PDF dị ka o kwere omume site na-agbanwe agbanwe mkpebi ya, yana ịgbanwere ihe oyiyi na-acha odo odo.
Na ibe ngwa weebụ, họrọ PDF akwụkwọ site na ịpị "DOWNLOAD LOCAL FILES", ma ọ bụ jiri nchekwa igwe ojii.
Na-esote, dezie ihe ndị a chọrọ ma pịa "Zọpụta mgbanwe".
Mgbe njedebe nke ọrụ ahụ, ngwa weebụ na-akpali gị ịchekwa faịlụ PDF dị ala site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Download".
Usoro 5: PDF24
Ebe a na-enwe ike ịgbanwe mkpebi nke ihe odide ahụ ma nye ohere nke izipu faịlụ edinyere site na mail ma ọ bụ faksị.
Pịa na aha"Dọrọ faịlụ ebe a ..."iji kwupụta akwụkwọ ahụ.
Na-esote, dezie ihe ndị a chọrọ ma pịa "Kọmpụ faịlụ".
Ngwa weebụ ga-ebelata nha ma nye ya iji chekwaa nsụgharị okirikiri site na ịpị bọtịnụ ahụ. "DOWNLOAD".
Lee kwa: PDF size reduction software
Niile ọrụ ndị a dị oke na-ebelata nnọọ otu akwụkwọ PDF. Ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ nhazi kachasị ngwa ngwa ma ọ bụ jiri ngwa weebụ yana ntọala dị elu.